अमेरिकाको भएको कार दु’र्घ:ट’नामा एक नेपाली महिलाको मृ’त्यु , अर्का एक नेपाली घा’इ:ते ! – PathivaraOnline
Home > प्रवास > अमेरिकाको भएको कार दु’र्घ:ट’नामा एक नेपाली महिलाको मृ’त्यु , अर्का एक नेपाली घा’इ:ते !
admin January 12, 2021 प्रवास	0
एजेन्सी । अमेरिकाको टे:क्सासमा भएको दु’र्घ:ट’नामा एक नेपली महिलाको मृ’त्यु भएको छ । बिहिबार राती भएको दु’र्घ:टना एकजना नेपाली महिलाको मृ’त्यु भएको छ भने चालक ४९ बर्षका विष्णुप्रसाद पौडेल घा’इ:ते भएका छन् । घा’इ:तेको नजिकको अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ ।
दुईवटा गाडी एक आ’पसमा ठो’क्कि:दा दु’र्घ’टना भएको जनाइएको छ । अर्को गाडीमा रहेका ४५ बर्षका थाओ ली नामका व्यक्ति घा’इ:ते भएको स्थानीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । दुईवटा गाडीहरु एक आपसमा ठो:क्कि’दा आगो लागेको थियो ।
** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला***
साउदीमा अलपत्र पारेको भन्दै केपी ओलीविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने नेपालीलाई स्थानीय प्रशासनले यस्तो गरेपछि…